आफ्ना श्रीमानलाई भुलेर पनि भन्दैनन् यी ६ कुरा महिलाले ! जानी राख्नुहोस के हुन् – mero sathi tv
आफ्ना श्रीमानलाई भुलेर पनि भन्दैनन् यी ६ कुरा महिलाले ! जानी राख्नुहोस के हुन्
On २१ चैत्र २०७४, बुधबार १५:५२
महिलाहरुलाई बुझ्न अप्ठेरो मात्रै होइन् असम्भव पनि छ । धेरैजसो यस्ता कुरा पनि छन् जो महिलाहरुको पेटमा पच्दैन् तर, यस्ता केही कुराको पनि कमी छैन जो कसैलाई भन्दैनन्, खासगरी आफ्नै श्रीमानलाई पनि भन्दैनन् ।
१) तपाई यो जानेर हैरानी हुनेछ कि तपाईकी पार्टनर आफ्नो बेष्टफ्रेण्डको विस्तरामा तपाईको पर्फमेन्सका बारेमा सबै कुरा बताइदिन्छन् । तर, तपाईले कहिले पनि उनलाई यस्तो कुरा शेयर गर्नुभो भने उनले इन्कार गर्नेछिन् ।
२) तपाईकी पार्टनरले तपाईलाई विहेभन्दा पहिला कति पुरुषसँग सेक्स गरेकी थिइन् भन्ने कहिल्यै बताउँदैनन् । यदि उनले मदिराको नशामा मुख खोले भने अर्कै कुरा हो ।
३) श्रीमती चाहे पुरै समय तपाइसँगै बसेकी हुन् तर, उनी सधै तपाईबाट अनवैक्स र गलत त्वचालाई लुकाउने कोसिस गर्छन् ।
४) तपाईको तपाईकी श्रीमतीसँग जतिसुकै गहिरो सम्बन्ध होस् तर, यदि उनलाई तपाईबाट कुनै परेशानी हुन्छ भने उनी आफ्ना एक्स ९पूर्व प्रेमी०का बारेमा जरुर सोच्नेछिन् र तपाईको तुलना उनसँग गर्नेछिन् ।
५) श्रीमती आफ्नो श्रीमानको सधै जज गर्छिन् । उनीहरु पर्फेक्ट पार्टनरको इच्छा राख्छन् । कैयौपटक श्रीमानमाथि हुने शंकालाई दुर गर्नका लागि निकै ध्यान पुगाउँछन् ।
६) महिलाहरु सधै चाहन्छन् कि उनी जोसँग प्रेम गर्छिन् उसले दिनरात उनकै बारेमा सोच्ने गरोस् । यसकारण उनीहरु हरेक समयमा श्रीमानको ध्यान आफूतर्फ आकर्षित गर्नमा लागिरहेका हुन्छन् ।
यस्ता छन प्रेमका प्रकार : तपाइँ कस्तो प्रेममा हुनुहुन्छ हेर्नुहोस
यसरी बनाउनुहोस्, आलु चिउराको स्वादिलो पकौडा